Ma dooneysaa inaad ogaato xaaladda deynta adduunka ee uu saameeyey cudurkan faafa? Ma rabtaa inaad ogaato waxyaabaha ku soo kordhay dalalka kale? Fadlan hubi wararka CFM maanta. | Jesson
Ma dooneysaa inaad ogaato xaaladda deynta adduunka ee uu saameeyey cudurkan faafa? Ma rabtaa inaad ogaato waxyaabaha ku soo kordhay dalalka kale? Fadlan hubi wararka CFM maanta.
1. Natiijooyinkii ugu dambeeyay ee korjoogteynta ee ka soo baxay Machadka Maaliyadda Caalamiga ah waxay muujinayaan in cudurka faafa awgiis, deynta adduunku ay kordhisay US $ 24 tiriliyan oo ah rikoor US $ 281 tiriliyan ah sanadka 2020. Isla mar ahaantaana, saamiga deynta-iyo-GDP-da adduunka waa in ka badan 355%. Deynta dowladda oo ah saamiga GDP-ga ayaa u kacday 105% halka 88% ahayd sanadkii 2019.
2 Mareykanka wuxuu si rasmi ah ugu biiray heshiiskii Paris ee isbedelka cimilada adduunka. Us Xoghayaha Arimaha Dibada ee Mareykanka Abraham Lincoln ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in heshiiska Paris uu yahay qaab caalami ah oo aan horay loo arag oo loogu talagay. Kadib markii uu dhaariyay xafiiska 20-kii Janaayo, Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden wuxuu ku dhawaaqay talaabooyin dhowr ah oo dhanka maamulka ah, oo ay ka mid yihiin ku soo noqoshada Mareykanka heshiiskii Paris ee isbedelka cimilada iyo joojinta ka bixitaanka ee Ururka Caafimaadka Adduunka.
3. Rover-ka "dulqaadashada" Mareykanka wuxuu si guul leh ugu degay Mars, isagoo noqday rotorkii shanaad ee guuleysta ee NASA. Ka dib markii ay soo degtay, hal adayggu wuxuu dib u soo celiyay sawirkiisii ​​ugu horreeyay ee dusha sare ee Martian, ka dib kaas oo uu ku soo ururin doono shaybaarrada Mars oo uu isku dayi doono inuu helo caddeyn jiritaanka nolosha.
Sida laga soo xigtay warbixin cusub oo la sii daayay 19-kii oo ay soo saartay ONE Campaign, oo ah hay'ad caalami ah oo aan faa'iido doon ahayn ayaa u heellan wax ka qabashada saboolnimada iyo cudurrada laga hortegi karo, sida lagu sheegay xogta shanta shirkadood ee dawooyinka, Pfizer, Modena, AstraZeneca, Johnson iyo Novax, illaa hadda, Mareykanka, Midowga Yurub, Ingiriiska, Australia, Kanada iyo Japan ayaa helay in kabadan 3 bilyan oo qiyaasta tallaalka COVID-19, in kabadan 1 bilyan oo qiyaas oo ka badan bilyanka 2.06 ee loogu baahan yahay dhammaan dadka ku nool dalalkan inay helaan laba qiyaasood oo tallaal. Ururka Caafimaadka Adduunka (WHO) ayaa ku boorriyay dalalkan inay la wadaagaan tallaalka waddamada saboolka ah si loola dagaallamo cudurkan.
5. Mareykanku wuxuu si rasmi ah ugu biiray heshiiskii Paris ee isbedelka cimilada adduunka. Us Xoghayaha Arimaha Dibada ee Mareykanka Abraham Lincoln ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in heshiiska Paris uu yahay qaab caalami ah oo aan horay loo arag oo loogu talagay. Kadib markii uu dhaariyay xafiiska 20-kii Janaayo, Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden wuxuu ku dhawaaqay talaabooyin dhowr ah oo dhanka maamulka ah, oo ay ka mid yihiin ku soo noqoshada Mareykanka heshiiskii Paris ee isbedelka cimilada iyo joojinta ka bixitaanka ee Ururka Caafimaadka Adduunka.
6.Toddobo shaqaale ah oo ka shaqeeya warshad lagu farsameeyo digaagga oo ku taal koonfurta Ruushka ayaa la soo darsay fayraska ifilada shimbiraha, wakaaladda wararka Ruushka ee TASS ayaa werisay Isniintii. Tani waa markii ugu horeysay ee kiis bini aadam oo ku saabsan hargabka shimbiraha ee H5N8 laga helo dalka Ruushka, Ruushkuna wuxuu ku wargaliyay hay'ada caafimaadka aduunka ee WHO. Khubaradu waxay sheegeen in aysan jirin kiisas la xiriira isu gudbinta bini-aadamka ee hargabka H5N8 ee laga helay Ruushka. Si kastaba ha noqotee, suurtagalnimada isu-gudbinta bini-aadamka ka dib isbeddellada fayraska mustaqbalka lama diidi karo.
7. [WTO] rubuca afaraad ee 2020, heerka cimilada ee ganacsiga caalamiga ah ee badeecadaha wuxuu gaadhay 103.9, halka uu ka ahaa 100.7 rubac saddexaad. Kadib hoos u dhac weyn oo ku yimid ganacsiga badeecada qeybtii hore ee sanadka 2020, mugga ganacsiga caalamiga ah ee badeecadaha ayaa dib uga soo kabtay dooxada ilaa rubacii seddexaad, oo ay keeneen dhoofinta sare ee Aasiya iyo kordhinta soo dejinta ee Waqooyiga Ameerika iyo Yurub. Laakiin dib u soo celinta waxaa laga yaabaa inaysan sii socon karin rubuca hore ee 2021.
8 Laga bilaabo Sebtember 1, 2021, Thailand waxay ka qaadi doontaa 7 boqolkiiba canshuurta qiimaha lagu kordhiyay adeegyada elektarooniga ah dhammaan hawlwadeenada adeegga elektaroonigga ah ee shisheeyaha ah ee bixiya adeegyada qadka ee dakhliga sanadlaha ah ee ka badan 387000 yuan. Dowladda Thai waxay rajeyneysaa in canshuurta ay kordhiso dakhliga qiyaastii 1.1 bilyan yuan sanadka canshuurta 2021.
Mareykanka gudihiisa, dareenka jiritaanka shirkadaha ujeedo gaar ah la wareegida ayaa sare u sii kacaya. Ballaarinta cudurka faafa ee COVID-19 dartiis, siyaasadda fududeeynta maaliyadeed ee adduunka ayaa horseeday lacag aad u tiro badan oo ku qulquleysa shirkado ujeeddo gaar ah la leh. Laga soo bilaabo 2021, qadarka soo iibsiga wuxuu ku dhowaaday $ 85 bilyan, oo ka dhigan 30% wadarta suuqa wax iibsiga Mareykanka. In ka badan 300 shirkado ujeeddo gaar ah loo iibsado ayaa raadinaya shirkado ay soo iibsadaan. Tirada shirkadaha noocan oo kale ah ee la qoro waxay gaareen 398. Bishii Janaayo oo kaliya, 91 shirkadood ayaa si rasmi ah loo shaaciyay, iyagoo uruuriyay wadar ahaan qiyaastii $ 25 bilyan, oo u dhiganta 60% IPO, ku dhowaad 100 mashruuc ayaa loo qorsheeyay inay hirgeliyaan IPO.
10-Gobolka Texas ee Mareykanka usbuucii la soo dhaafay wuxuu ku soo rogay xayiraad ku meel gaar ah dhoofinta gaaska dabiiciga ah, abuurista xiisad xagga tamarta ah oo ka jirta Mexico, taas oo aad ugu tiirsan gaaska dabiiciga ah ee laga keeno Mareykanka. Madaxweynaha Venezuela Maduro oo ka jawaabaya ayaa sheegay inuu qorsheynayo inuu u yeero madaxweynaha Mexico Lopez wuxuuna soo jeediyay in Venezuela ay hubiso in gaaska dabiiciga la siiyo Mexico. Cunaqabateyn muddo dheer saarnayd Mareykanka darteed, Venezuela ma lahan xarumo loogu beddelo gaaska dabiiciga gaaska dabiiciga ah ee dareera, ayay wakaaladda wararka ee Reuters ka soo xigatay khubarada tamarta.
11-kii maalmood ee la soo dhaafey, 10 magaalo oo ku yaal waqooyiga-galbeed ee gobolka Akre ee dalka Brazil ayaa waxaa ku dhuftey daadad, kuwaas oo si ba'an u saameeyey nolosha qiyaastii 130000 oo qof oo ku nool gobolka, waxaana dadka barokacay la dejiyey hoy ku meel gaar ah oo ay dhisteen iskuulo, jimicsi iyo meelo kale. Waqtigan xaadirka ah, sii xumaynta cudurka COVID-19 ee gobolka, faafitaanka qandhada dengue, ku dhowaad burburka nidaamka daryeelka caafimaadka iyo tirada badan ee qaxootiga Haiti ee ka soo galaya Brazil xadka gobolka uu la wadaago Peru, Akre State ayaa soo galay xaalad deg deg ah Febraayo 16.
12-kii Febraayo 21, waqtiga maxalliga ah, in ka badan 100000 oo mudaaharaadayaal ah ayaa isugu soo baxay waqooyiga Hindiya ee gobolka Punjab si ay uga mudaaharaadaan sharciga cusub ee beeraha ee dowladda. Booliska maxalliga ah ayaa ku qiyaasay in isu soo bixii ugu dambeeyay ee dibadbaxayaashu uu u dhexeeyay 120000 iyo 130000 oo qof. Dibadbaxayaasha ayaa ka dalbaday Mr. Modi in uu tirtiro dhowr hindise sharciyeed dib-u-habeynta beeraha oo la soo saaray bishii Sebtember ee la soo dhaafay, taas oo beeraleydu u maleynayeen in ay dhaawaceyso danahooda ayna ka faa'iideysan doonaan shirkadaha waaweyn qaarkood. Ururka beeraleyda ayaa wacad ku maray inay sii wadayaan mudaharaadka ilaa sharciga lagala noqonayo.
13, 2020, Cudurka faafa ee 'COVID-19' wuxuu ku kordhiyay deynta adduunka US $ 24 tiriliyan, wadarta guud ee deynta adduunkuna waxay gaartay rikoor US $ 281 trillion, oo ka dhigan 355% ee wax soo saarka guud ee adduunka (GDP), koror 35% ah leh 2019. Heerka kobacaani wuxuu sidoo kale ka sarreeyaa kii 2008, markii dhibaatada subprime ay dhacday.
14. Xoghayaha Maaliyada ee Mareykanka Yellen: Seeraar waxaa badanaa loo isticmaalaa maalgelinta sharci darrada ah. Codsigeedu waa mid aan waxtar lahayn. Bitcoin waa mid mala awaal ah. Maalgashadayaashu waa inay iska jiraan. Lacagta dhijitaalka ah waxay u horseedi kartaa lacag bixin dhaqso iyo jaban, laakiin waxaa jira arrimo badan oo u baahan in la barto, oo ay ku jiraan ilaalinta macaamilka iyo lacagta la dhaqay.
15. Bill Gates: mamnuucida baraha bulshada waxay u horseedi kartaa kala qeybsanaan badan Mareykanka. Ma dooneyno inaan u kala qaadno shabakadaha bulshada laba qaybood, waxaan dooneynaa inaan aasaas wadaagno oo aan fikradaha is weydaarsano taas.
Waqtiga dhejinta: Feb-23-2021